Shir degdeg ah oo la xiriira xayiraadii Maanta sheikh Shariif oo ay isugu imaanayaan Xasan Sheekh, Sh. Shariif iyo Xisbiyada siyaasadda — CAASIMADA
Home WARARKA MANTA Shir degdeg ah oo la xiriira xayiraadii Maanta sheikh Shariif oo ay...
Shir degdeg ah oo la xiriira xayiraadii Maanta sheikh Shariif oo ay isugu imaanayaan Xasan Sheekh, Sh. Shariif iyo Xisbiyada siyaasadda
Waxaa socda qaban qaabada shir degdeg ah oo gelinka dambe ee maanta ay ku yeelanayaan magaalada Muqdisho, Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya iyo Axsaabta Siyaasadda, sida ay ilo kala duwan u xaqiijiyeen Warbaahinta gudaha
Previous articleDuqa Magaalda Muqdisho oo qaabilay Wafdi ka socda UNHCR Maxayse ka wada hadleen?
Next articleDEG DEG: Qaar kamida jabhadii ka dilaacday Awdal oo gacanta lagu soo dhigay & Somaliland oo war ka soo saartay
Shir logu dhex dhexaadinaayo Soomaalida iyo Oromada Oo ka furmay Jigjiga.
Madaxweyne Deni Oo amaro adeg dul dhige Sarakiisha amaanka.warar soo kordhay